timbo zimbabwe's Profile
timbo zimbabwe's Contacts
timbo zimbabwe is not following anyone.
timbo zimbabwe's Forum Posts
timbo zimbabwe on Feb 22nd 2008 at 12:39am PST
In response to: Anyone else make the mistake of buying an Xbox360?
timbo zimbabwe on Jul 20th 2007 at 2:18am PDT
In response to: WEP key viewer
timbo zimbabwe on Oct 6th 2006 at 10:09am PDT
In response to: Need help with Scheduling a task for Halloween
timbo zimbabwe on Apr 22nd 2006 at 7:13am PDT
In response to: Ok, enough arguing - I am going to take over the world!!!
timbo zimbabwe on Aug 16th 2005 at 12:28pm PDT
In response to: Ethical Dilemma
Treat her as any other "employee"
timbo zimbabwe on Sep 23rd 2004 at 1:28am PDT
In response to: The CEO's Wife Is Killing Us!
timbo zimbabwe on Sep 13th 2004 at 4:58am PDT
In response to: Why is non-outsourced tech support so bad?
timbo zimbabwe on Sep 13th 2004 at 4:55am PDT
One way to reduce potential problems...
timbo zimbabwe on Aug 23rd 2004 at 1:33am PDT
In response to: What are some of the most common issues related to VPNs?
Most Common VPN Problem
timbo zimbabwe on Aug 23rd 2004 at 1:27am PDT